SOMALI TIGERS OO NOQOTAY KOOXDA SANADKA 2008 EE GOBOLKA MINISOTA
Waxaa maalintii Sabtida taariikhduna ahayd 11/29/2008 Magaalada Burnsville ee Gobolka Minisota, USA lagu soo gebagebeeyay tartanka Kubadda cagta ee Somali Fall League 2008, waxaana ku guuleystay Tartankaas kooxda Somali Tigers.
Ciyartii kama dambeysta ahayd ayaa dhexmartay labadda kooxeed ee kala ah Somali Tigers iyo Cedar Stars, isla markaana ahayd mid aad iyo aad u adkeyd. Macalin Barkhad iyo kooxdiisa Cedar Stars ayaa qaybtii hore cayaar wanaag soo bandhigay, weerar is daba joog ah oo xamaasad lehna la beegsaday S. Tigers, balse waxay qaybtii hore ku soo gebagebowday barbar dhac 2-2. Qaybtii labaad ee cayaartan kama danbaysta ah ayey labadda kooxiba fooda isa saaren iyaga oo dar dar iyo dadaal dheerad ah muujinaya. Kooxda Somali Tigers ayaa waxa ay lasoo if bexeen farsamo iyo dar dar aad u xoogan taas oo u suura gelisay inay guushu raacdo, koobkana ku qaadan natiijo dhan 5-3.
Qoraalka iyo Sawirada oo weyn halkan ka eeg (PDF)
Kooxda Somali Tigers
Kooxda Cedar Stars
Cayaartan oo ahayd mid aad xiiso iyo xamaasad xoogleh u leh ayaa waxaa ka soo qeybgaleen gudiga cayaaraha ee gobolka Minisota oo iyagu billadaha gudoonsiiyay cayaartoydii iyo kooxihii iyagu mutaystay abaalmarinta. Gudiga cayaaraha oo ay qaarkamid ahi ahaayeen cayaartooydii hore ee dalka Soomaaliya, sida Cabbdullahi Morgan, Sacid Mashaale, Cabdiraxman Amaan, Cabdiasis Bixi iyo Maxamud Madaxey ayaa iyagu hadalo guubaabin iyo wacyi galin iskugu jira la wadaagay cayaartooydii halkaas iskugu yimid. Waxaa kaloo cayaarta daawanayey Dadweyne aad u tiro badan iyo marti sharaf kale oo kamid ah bulsho weynta Soomaaliyeed ee degan gobolka Minisota.
Cayaartoygii ugu wanaagsanaa cayaarta kama danbaysta ah ayaa waxaa noqday Diini Axmed oo isagu u ciyaara S.Tigers. Bashiir oo u ciyaara kooxda Midnimo ayaa wuxuu noqday cayaartoyga ugu wanaagsanaa tartankan. Khalid (Okocha) oo u ciyaara kooxda Cedar Stars ahna wiil aad u da’a yar ayaa wuxuu ku guulaystay abaal marinta gool dhaliska, halka macalin Carab Dheere oo macalin u ah kooxda Twin City Stars uu isaguna hantay bilada macalinka ugu wanaagsanaa tartanka. Gool haye Abdiqani Ducaale oo u cayaara kooxda Communality ayaa noqday gool hayihii ugu wanaagsanaa tartanka. Abdinuur Jama (Buulo) ayaa helay abaal marinta difaaca ugu wanaagsanaa tartanku intuu socday. Abdi Najiib oo ah maamulaha guud ee kooxda Cedar Stars ayaa noqday abaabulaha iyo maamulaha ugu wanaagsan ee maamula koox kamid ah kooxaha Gobolka Minisota ka dhisan .
Kooxda Somali Tigers ayaa waxay noqotay kooxda ugu wanaagsan ama kooxda sanadka 2008 ee Gobolka Minisota ee dalka Maraykanka. Kooxdan ayaa waxay ku guulaysatay afartii koob ama horyaal ee sanadkan lagu qabtay gobolkan Minisota, halka ay gaareen ciyaarta kama dambaysta ah koobka weyn ee lagu qabto magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Macalin Jibriil oo ah macalin aad u da’ yar ahna macalinka sanadka sida aan anigu u arko ayaa intii uu la wareegay xilka macalinimada kooxda Somali Tigers ayay u suurto gashay in uu soo hooyo guulo badan, kooxdiisuna ay hanatay afar koob oo is daba joog ah. S. Tigers ayaa soo bandhigta cayaar wanaag joogto ah iyaga oo dhankasta ka dheeli tiran, tartan kasta oo ay ka qayb galeen sanadkan 2008 cayaarta kama danbaysta ah soo gaaray, dabadeedna hantay abaal marinta koobaad.
Qore: Abdirahman Mukhtar (Abdirashiid)